मृत्युबाट छुटकारा—हामी किन चाहन्छौं अनि किन आवश्यक छ
लेखको भाषा अकोली अङ्ग्रेजी अफ्रिकान्स अरबी अल्बेनियन आएमारा आम्हारिक आर्मेनियन आर्मेनियन (पश्‍चिमी) इग्बो इटालियन इन्डोनिसियन इबान इलोको इसोको ईवी उङ्गाबेरे उन्डुबेली उन्डुबेली (जिम्बावे) उम्बुन्डु एफिक एस्टोनियन ओटेटेला ओसेसियन कम्बोडियन काजाक किकाओन्डे किकाम्बा किकुयु किन्यारवान्डा किम्बुन्डु किरून्डी किर्गिज किलुबा किसोंगे कुइचुआ (इम्बाबुरा) कोंगो कोरियन क्याटालान क्रिओ क्रोएसियन क्वान्गाली क्वान्यामा क्वेचा (आयाकुचो) क्वेचा (बोलिभिया) क्षोसा गा गाउरानी गारीफुना ग्रीक चिचेवा चिटुम्बुका चिटोंगा चिनियाँ क्यान्टोनिज (परम्परागत) चिनियाँ म्यान्डरिन (परम्परागत) चिनियाँ म्यान्डरिन (सरल) चियाओ चेक चोवे जर्जियन जर्मन जान्डे जापटेक (इस्मस) जापानी जुलू टगालोग टर्किश टाटार टिग्रिन्या टिभ टुभालुअन डच डाँग्मे डेनिश तोक पिसिन तोतोनक त्लापनेक त्वी त्सोंगा थाई नजेमा नर्वेली नाह्वाटल (उत्तरी पुएब्ला) नाह्वाटल (वास्टेका) नाह्वाटल (सेन्ट्रल) नेपाली नोंगा न्यानेका पापियामेन्टो (अरुबा) पापियामेन्टो (कुरासाओ) पारसी पोर्चुगिज पोलिश फिनिश फ्रान्सेली बुल्गेरियन भियतनामिज भेन्डा मङ्ग (ह्वाइट) मझतेक (हुआट्ला) माम माम्ब्वे-लुंगु माया मालागासी माल्टिज मिजो मिहे मूर म्यानमार म्यासडोनियन युक्रेनियन योरूबा रुन्यानकोर रूसी रोमानियन लिंगाला लिथुआनियन लुओ लुगान्डा लुन्डा लुभेल वायुनाइकी वोलाइटा शिलुबा शोना सर्बियन सर्बियन (रोमन) साङ्गो सिंहला सिडामा सिनयान्जा सिबेम्बा सिलोजी सेत्स्वाना सेपेडी सेबूआनो सेसोथो (लेसोथो) सोट्सेल स्पेनिश स्रानानटोंगो स्लोभाक स्लोभेनियन स्वाहिली स्वाहिली (कंगो) स्विडिस हंगेरियन हाइटियन क्रिओल हिब्रू हिरी मोटु हिलिगेनोन हौसा
आवरण लेख | मृत्युबाट छुटकारा!—कसले दिन सक्छ?
“स्त्रीबाट जन्मेको मानिस अल्प-आयुका र अशान्तिले भरिएको हुन्छ, त्यो फूलझैं फक्रन्छ र ओइलाइहाल्छ। त्यो छायाँजस्तै हराइहाल्छ, रहँदैन।”—अय्यूब १४:१, २.
जवान र निरोगी भएर सधैंभरि बाँचिरहन पाए कत्ति राम्रो हुन्थ्यो भनेर मानिसहरूले सोचेको युगौं बितिसकेको छ। तर दुःखको कुरा मानिसहरू कोही पनि सधैंभरि बाँच्न सकेको छैन। हो, हामी मर्छौं। माथि उल्लेख गरिएका अय्यूबका शब्दहरू तीन हजार वर्षअघि लेखिएको भए तापनि ती कुराहरू आज पनि त्यत्तिकै सत्य छ।
मानिसहरूमा सधैंभरि बाँच्ने चाहना निकै प्रबल छ। परमेश्वरले नै मानिसहरूको हृदयमा अनन्तताको चाहना राखिदिनुभएको हो भनी बाइबलमा लेखिएको छ। (उपदेशक ३:११, NRV.) त्यसोभए मायालु परमेश्वरले पाउनै नसक्ने चाहना मानिसमा राखिदिनु सुहाउँछ र? सुहाउँदैन। परमेश्वरको वचनमा मृत्युलाई शत्रु भनी बताइएको छ र मृत्युलाई “अन्तमा नामेट” पारिनेछ भनेर पनि प्रतिज्ञा गरिएको छ।—१ कोरिन्थी १५:२६.
मृत्यु हाम्रो शत्रु हो भन्ने कुरामा कुनै शङ्का छैन। साधारणतया कोही पनि सद्दे मानिस मर्न चाहँदैन। खतरा आउने बित्तिकै हामी त्यसबाट जोगिने कोसिस गर्छौं, लुक्छौं वा भाग्छौं। हामी बिरामी भयौं भने पनि निको हुन अनेक उपाय अपनाउँछौं। आफूलाई मृत्युबाट जोगाउन हामी कुनै कसर बाँकी राख्दैनौं।
हाम्रो शत्रु मृत्युलाई नामेट पारिने कुरामा विश्वास गर्ने के कुनै आधार छ? छ। सृष्टिकर्ता यहोवा परमेश्वरले मानिसजातिलाई केही वर्ष बाँच्ने अनि मर्ने गरी बनाउनुभएको थिएन। मानिसहरू मरून्‌ भन्ने परमेश्वरको उद्देश्य थिएन। बरु उहाँले मानिसहरूलाई पृथ्वीमा सधैंभरि बाँच्न सकून्‌ भनेर बनाउनुभयो। उहाँले जुन उद्देश्य राख्नुहुन्छ त्यो पूरा पनि गर्नुहुन्छ।—यशैया ५५:११.
त्यसोभए मृत्युको अन्त कसरी हुन्छ त? इतिहासलाई केलाएर हेर्ने हो भने मानिसहरूले अमर रहनको लागि अनेक उपाय अपनाएका छन्‌। तर कोही पनि सफल भएका छैनन्‌। कोसिस अहिले पनि जारी नै छ। वैज्ञानिकहरूले रोग निको पार्ने औषधी र खोपहरूको आविष्कार गरेका छन्‌। जीवित प्राणीहरूको शारीरिक बनौटको गहिरो अध्ययन गरेका छन्‌। सय वर्षअघिको तुलनामा अहिलेका मानिसहरू लामो समयसम्म बाँचेको पाइन्छ। तर पनि मानिसले मृत्युलाई भने जित्न सकेको छैन। “सबै माटैमा मिल्नेछन्‌” भनेर बाइबलमा लेखिएको कुरा सत्य साबित भएको छ।—उपदेशक ३:२०.
तर खुसीको कुरा, मृत्युको अन्त गर्न हामी मानिसको बुद्धिमा भर पर्नु पर्दैन। यहोवा परमेश्वरले हामीलाई मृत्युबाट बचाउने प्रबन्ध मिलाइ सक्नुभएको छ। यस प्रबन्धमा येशू ख्रीष्टको मुख्य भूमिका छ।